Digitalis: nhọrọ nke ndị kachasị ewu ewu (nkọwa na foto) - Digitalis - 2019
Ghọta ụdị nke digitalis
Digitalis ma ọ bụ Latin aha digitalis (Digitalis), nke sụgharịrị dị ka mkpịsị aka. Aha nke osisi ahụ nwetara maka ọdịdị nke corolla, ọ yiri ihe a na-atụgharị, site na nke a, aha Russian - foxglove. Ogwu a bu nke ndi ezinulo. N'ime ụwa, e nwere ụdị osisi 25 mara mmadụ. Germinates niile Europe, West Asia na North Africa. Eziokwu ha bu na ha nwere digoxin, nke bu otu ndi glycosides obi.
Ọ dị mkpa! Digoxin, ọ bụ ezie na ọ dị oke irè n'ịgwọ ọrịa afọ na-edozi ahụ, ma n'ọtụtụ buru ibu bụ nsi egwu!
Tụlee ụdị nke dijitalụ.
Digitalis obere-flowered (Digitalis parviflora)
Digitalis rusty (Digitalis ferruginea)
Digitalis woolly (Digitalis lanata)
Dijitalụ Digitalis (Digitalis lutea)
Osisi Digitalis - osisi nke osisi nke na-eto eto na steppes na oke ohia nke Southern, Western na Central Europe. Elu na-erute 80-100 cm. Akwụkwọ dị ogologo, nwere ọdịdị oval oge ochie. Ngwurugwu na-etolite na ị ga-agbanye, nke ọ bụla na-acha odo odo, odo odo. Ifuru dị obere, ogologo karịa atọ sentimita. Brown sprinkling dị ugbu a na ụfọdụ ụdị. Nji nwayọọ na-enyefe oyi. Mgbe a na-eme ka odo odo na-acha odo odo n'ogige ahụ n'oge oyi siri ike, a na-atụ aro ya ka o wuo ụlọ. Na-agba ọkụ na mmalite July ma na-agbaji ruo mgbe agwụ agwụ.
Ị ma? N'ihi ọdịdị dị ịtụnanya ya, ndị na-elekọta ubi na-ahụ ya n'etiti narị afọ nke 16 na ọ ka bụkwa mma na-egbuke egbuke maka ubi ahụ.
Digitalis grandiflora - osisi osisi ma ọ bụ omenial mgbe toro na ubi. Ọ na-eto na Western Europe, Asia na Siberia. A na-achọta ya mgbe nile na ala ahịhịa juru, ebe dị egwu na n'etiti osisi nke osisi. Mkpịsị aka ruru ogo 120. Ogwe ọka ahụ dị mma ma na-ebipụta akwụkwọ, mgbe ụfọdụ alaka na ala. Akwụkwọ ndị ahụ nwere ụdị mpempe akwụkwọ ọ bụla. Ụdị ha na-abawanye site na elu nke ala ahụ. Osisi okooko osisi nke nwere nnukwu osisi buru ibu, ogologo 4-5 cm. Okooko osisi nwere ike ịbụ odo odo na ọgaranya na-acha odo odo. Osisi nke okooko osisi na-etolite dị ntakịrị karịa karịa ụdị ndị ọzọ, ruru 20-25 cm. Ụdị foxglove a na-amụba n'afọ nke abụọ mgbe ọ kụsịrị. N'ime ohia, ọ na-agba site n'ịgha mkpụrụ n'onwe ya, n'ihi na ọ kụrụ n'ubi ọ ka mma iji seedlings toro na greenhouses na greenhouses, nke a kụrụ tupu oyi ma ọ bụ ná mmalite oge opupu ihe ubi.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ niile nke foxglove dị iche iche bụ igbe yiri nke cone n'ogologo 8-12 mm.
Foxglove dị ọcha bụ osisi perennial, ndị na-akọ ubi na-eto ya dị ka afọ abụọ, ebe ọ bụ na n'afọ nke atọ, ọ na-akwụsị oge ntoju, na-efunahụ ya, ma ọ bụ nwụọ kpamkpam. A chọtara n'ọhịa na Europe na North Africa. Digitalis purpurea rute elu nke 150-200 cm. Mmiri ya na-etolite site na 80-90 cm N'elu ihe ọ bụla, ọtụtụ okooko osisi tubular nke na-eru ogologo 6 cm pụtara n'oge okooko. Ụcha nke petals abụghị naanị odo odo, ọ nwere ike ịcha ọcha , pink, odo odo na ude. Ọzọkwa, a na-ejupụta ebe ndị ahụ na-acha ntụpọ na ntụpọ nke onyinyo gbara ọkpụrụkpụ karịrị ka ọ bụ onwe ya. Na epupụta nwere oval-lanceolate ụdị - 35-40 cm. Agba nke epupụta dị iche iche na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na n'elu osisi ka grayish n'okpuru. Nke a bụ eziokwu ahụ bụ na epupụta na dijitalis densely pubescent. Na-acha ọbara ọbara na June ma na-agbachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge okpomọkụ niile.
Ọ bụrụ na ị na-ewepu mkpụrụ osisi mịrị amị, foxglove ga-etolite brushes ọhụrụ. Ụdị a bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ọnọdụ nsị, ọ na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala ọ bụla nke nwere chernozem, ma e wezụga ala acidic. Ọ bụ na-eguzogide na-eguzogide na oyi-eguzogide, mmasị penumbra, ma nwere ike ịzụlite na anyanwụ, ma ọ bụrụ na mmiri zuru ezu na-nọgidere na-enwe. Ụdị foxglove a bụ ihe kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ubi ma nwee ọtụtụ ụdị: "carousel" - petals petals, "nnukwu ọcha" - na-acha ọcha ọcha, "hụrụ nnukwu" - na-acha ọcha ọcha na-acha odo odo accent, "speck" - na-acha ọbara ọbara petals na burgundy ntụpọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
A na-ahụ ihe dị iche iche nke Digitalis obere osisi-osisi nke osisi herbaceous, na mpaghara ugwu ndị dị na Portugal na Spen. Ezigbo foxglove, dwarf e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ - ịdị elu ya dị naanị 40-60 cm. Mkpịsị ụkwụ ahụ bụ nke ziri ezi, dị mma, nwere agba ọchịchịrị na-acha odo odo. Akwukwo nke foxglove di obere na-ebelata site n 'ala ruo n'elu, nwee udi iru, ovoid udi, akaebe na njedebe. Na-agbapụta akwụkwọ, ma gba ọtọ n'elu. Ifuru nke foxglove a dị obere, ogologo ya ruru 1-2 cm. Petals bụ ihe na-acha odo odo ma ọ bụ ọbara ọbara na agba aja aja na-acha odo odo. Mkpụrụ nke ahịhịa na-eru n'ogologo 10 cm. Foxglove nke obere okooko osisi na July na blooms ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ụdị ntu oyi a na-eguzogide ọgwụ, nwere ike idi okpomọkụ ruo -20 Celsius C. Ọ dị mkpa
Ezigbo foxglove bụ osisi osisi herbaceous nke na-eto na Southern Europe na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Eshia. Ngwurugwu ahụ dị mfe, na-edozi. Na mpaghara ala nwere mkpuchi ntutu isi, na n'elu ihe mkpuchi dị na-efu. Osisi ala dị ogologo 30 cm, nwere ihe oblong, nke a na-emepụta nke ọma na ọkpụkpụ dị iche iche doro anya, na-eme ka ọ dị mma. Akwụkwọ elu nke foxglove dị nkọ ma bụrụ ihe na-adịghị mma, jiri nlezianya na-atụgharị anya dị ka ihe atụ. Okooko osisi n'ogologo - ruo 4 cm, ha dị ọtụtụ ma zukọta na nnukwu inflorescences. Brush-inflorescence esịmde ogologo 50 cm.
Ị ma? Dijitalụ di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche bu ndi na-edeghari aha na Red Book nke USSR. Ma ugbu a ha nọ n'okpuru nchebe na ụfọdụ mba CIS.
Okooko osisi dị iche na ụdị ndị ọzọ ma yie okooko osisi orchid. Agba nke petals nwere ike ịbụ odo odo, odo odo, odo odo na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo specks. N'elu okooko osisi nke umu a ka egosiputa egbugbere ọnụ. Ọ na-eto site na June ruo August, na-agba agba n'afọ nke abụọ mgbe mkpụrụ a ghara ịgha mkpụrụ. Ọ na-anabata oge oyi.
Digitalis nke ọma - osisi osisi herbaceous osisi, na omenala gbara alụkwaghịm dị ka afọ abụọ. Na-eto eto na Eastern Europe na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Eshia. A na-etolite n'ubi ala, ahịhịa, ụda osisi na osisi. Foxglove bụ ọkara n'ogo ma rute n'ogo 100 cm. Mkpịsị nke osisi ahụ dịzie, na ala ala ọ gba ọtọ, na mgbasa ozi ekwesara na akụkụ elu. Akwụkwọ ndị dị ala bụ oblong, lanceolate na pubescent, 12 cm n'ogologo. Akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ adịghị adị - nke dị nso n'elu osisi ahụ, ike ha na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche, dị ntakịrị ka ọ dị. Okpoko osisi ndị ahụ buru ibu, ruo 4 cm. Agba nke petals bụ odo ma ọ bụ aja aja-edo edo. Egbugbere ọnụ ala dị ọcha. Petals nabatara nke ọma. Ọkụ nke ahịhịa na-enwe ihe dị ka 50 cm. Ogologo ocha na-agbaji na July ma na-agbaji ruo ọgwụgwụ nke August. Hụrụ oghere na ebe na-egbuke egbuke. Ọ dịghị anabata nnukwu frosts.
Nkọwa ụdị ụdị uhie na-acha uhie uhie: ole na ebe ha bi, otú e si azụ nwa, esi kpochapụ ha n'ụlọ ahụ
Akụkụ nke nhọrọ na ntụziaka kachasị mma, esi esi nri ọka na cob na saucepan dị ụtọ na nke ziri ezi. Tupu na mgbe foto
Ịgba Roses: iche na foto na atụmatụ nke na-eto eto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ghọta ụdị nke digitalis